कसरी रत्न मूल्य अनुमान गर्ने? नयाँ अपडेट २०२१। उत्तम सुझावहरू
कसरी ढु stone्गाको मूल्य अनुमान गर्ने?
तपाईंको ग्यासको पहिचान गर्नुहोस्
तपाईंको ग्यासको गुणस्तर पहिचान गर्नुहोस्
तपाईंको जेम्स स्टानको पहिचान गर्नुहोस्
हीराको अपवाद बाहेक, विश्वमा पत्थर मूल्यको कुनै मान्य स्रोत छैन। केहि देशहरू नियमहरू मिलाउन कोशिस गर्दैछन्। तर यी नियमहरू यी देशहरूमा प्रत्येकमा मान्य छन्। विश्वका धेरैजसो देशहरूमा त्यहाँ कुनै नियम छैन।
ढु The्गा मूल्य केवल एक विक्रेता र एक क्रेता बीच सम्झौताको परिणाम हो। अवश्य पनि, त्यहाँ रत्नको मूल्य अनुमान गर्न आधारभूत नियमहरू छन्, जुन तल वर्णन गरिएको छ।
पहिलो, तपाईंले आफ्नो ढुङ्गा पहिचान गर्नु पर्छ, अर्थात्, ढुङ्गाको परिवार के हो? किसानको किसिमको छ? के यो प्राकृतिक वा सिंथेटिक हो?
त्यसपछि, यदि यो पत्थर स्वाभाविक हुन्छ भने अर्को अर्को प्रश्न हो: के यो व्यवहार गरिन्छ वा होइन?
यदि तपाईंको ढुङ्गा उपचार गरिन्छ भने अर्को प्रश्न हो: ढुङ्गामा कस्तो प्रकारको उपचार गरियो?
यी पहिले प्यारामिटरहरू त्यसो भए हामीलाई ढु the्गाको गुणस्तर अनुमान गर्न अनुमति दिनेछ।
यो सामान्यतया यो किसिमको सूचना हो जुन तपाईले जीमोलोजिकल प्रयोगशालाहरुद्वारा जारी सबै प्रमाणपत्रमा भेट्टाउनुहुनेछ। किनकि यी जानकारी हो कि यदि तपाई अनुभवी जीमोलोजी हुनुहुन्न भने तपाईं आफैले पहिचान गर्न सक्नुहुन्न र तपाईंसँग जीमोलोजी प्रयोगशाला उपकरण छैन भने।
तर यो पत्थरको मूल्य अनुमान गर्न पर्याप्त छैन।
एकपटक ढुङ्गा स्पष्ट रूपमा पहिचान भएको बेला, चार अतिरिक्त मापदण्डहरू परिभाषित हुनुपर्छ।
पहिलो रत्नको रंग हो, दोस्रो सेतो को स्पष्टता हो, तेस्रो तहको काटनको गुणस्तर हो र चौथो ढुङ्गाको वजन हो।
यी चार मापदण्डहरू हीरा बजारमा राम्ररी चिनिन्छन्, तर केही व्यक्तिले पनि सबै रत्नहरूमा लागू गर्दछ भनेर जान्दछन्।
जब तपाईंले ढुङ्गाको पहिचान गर्नुभयो, त्यहाँ पहिचान गर्न अझै एक पोइन्ट छ: बजारमा पत्थर मूल्य, भौगोलिक रूपमा र व्यापार बजारमा तपाईंको स्थिति अनुसार कतै स्थित छ।
वास्तवमा, एक पुरा तरिकाले समान पत्थर उत्पत्तिको देशमा कम महँगो हुनेछ भने यदि तपाईं विश्वको अन्य अन्तमा स्थित एक देशमा यसको तुलना तुलना गर्नुहुन्छ।
र अन्तमा, ढु stone्गाको मूल्य पनि फरक हुन्छ तपाईले थोक वा रिटेल मार्केटमा रत्न खरीद गर्नुहुन्छ कि हुँदैन। ढु also्गा पहिले नै गहनामा माउन्ट गरिएको छ कि छैन भन्नेमा निर्भर गर्दै मूल्य पनि फरक हुनेछ।
वास्तवमा, जस्तै सबै आर्थिक क्षेत्रहरूमा, रौतहट उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता बीचको मध्यवर्तीहरू, उच्च मूल्य भिन्नताहरू।
कुनै द्रुत फिक्स छैन। यदि तपाईं ढु stone्गाको मूल्य अनुमान गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं आफू भएको ठाउँमा रत्न आपूर्ति गर्नेहरूलाई भेट्न आफैंको लागि बजार अध्ययन गर्नुपर्दछ, र तिनीहरूको मूल्यहरू तुलना गरेर तपाईं पक्कै विचार पाउनुहुनेछ। यस भौगोलिक क्षेत्रमा लागू हुने रत्नहरूको मूल्य, यो सटीक समयमा।
यो स्थायी काम हो किनकि मूल्यहरू चाँडै परिवर्तन हुन सक्दछ।